Tronsmart na-emekọ maka afọ iri nke Aliexpress | Akụkọ akụrụngwa
Rafa Rodríguez Ballesteros | | Ndị na-ekwu okwu, Ngwa, General
Echi bu ụbọchị dị mkpa n'ụwa nke ịzụ ahịa n'ịntanetị. Aliexpress, ụlọ ahịa ịzụ ahịa kachasị ama na China, na-agba afọ iri ya. Afọ iri nke ọrụ, nke, n'ezie, ga-eme ememe na onyinye dị egwu. Tronsmart sonye n'ememe a ma wetara anyi ihe ahia ato nwere ike iwepu.
Ọ bụrụ na ị na-achọ oge iji nweta gadget metụtara egwu Gaghị agbaghara a oge. Tronsmart na-akpọkwa anyị ka anyị mee emume XNUMXth nke Aliexpress ma nyekwa onyinye ya. Afọ iri na-ere ngwaahịa na-aga ogologo ụzọ. Ọ bụrụ n’ịchọrọ isonye na pati ahụ lee anya n’aro anyi na ewetara gi.
1 Ihe karịrị 40% ego na ngwaahịa Tronsmart
1.1 Onuzo Onyx Ace
1.2 Tronsmart T6 Gụnyere
1.3 Tronsmart Spunky Naa
Ihe karịrị 40% ego na ngwaahịa Tronsmart
Site na Tronsmart ha na-ewetara anyị atọ dị iche iche nhọrọ, ihe niile metụtara ụda na egwu, ka anyị wee nwee ike irite uru nke Aliexpress nke ọmụmụ ụbọchị iri. Oge ole na ole anyị nwere ike ịchọta nke anyị nwere ike ịzụta ngwaahịa nke egosipụtara na ọnụahịa ndị a dị egwu. Ọ bụrụ n ’ịchọrọ igweisi ikuku ma ọ bụ igwe okwu Bluetooth, echefula ohere ahụ.
Onuzo Onyx Ace
Ndị mmadụ amaghị Igwe olu TWS (Ezi Ikuku Ikuku) nke nwere ezigbo nlezianya Ha na-enye teknụzụ kachasị ọhụrụ iji were ahụmịhe na-ege ntị na ọkwa ọzọ. N'ihi Qualcomm mgbawa enwere ike inweta mma ụda dị mma tinyere njikọ ngwa ngwa ma kwụsie ike. Ha gosipụtara onye ọkwọ ụgbọala 13mm gbasaa elu karịa 10mm AirPods.
Anyị na-achọta teknụzụ si Nkagbu Noise n'ihi na ihe ịrịba music ahụmahụ na-enweghị mpụga nnyonye anya ukwuu Cleaner. N'ihi otu onye a mụụrụ ihe ike ịrụ ọrụ ochichi ya, n'ihi okwu ikpe ya, o na - agbatị gị 24 awa playback. Ọtụtụ nnwere onwe maka ekweisi ndị a iji soro anyị nọrọ ụbọchị niile.
Na-adabere emetụ njikwa ka anyị nwee ike ijikwa egwu egwu na-enweghị iburu ekwentị gị n’akpa gị. Ọzọkwa, anyị nwere ike iji ha nọọrọ onwe haAbụọ maka ịge egwu na maka ikwu okwu na ekwentị n'ụdị «mono». Kedu ka anyị si ahụ ezigbo uzo ozo nke AirPods na ekele nke afọ iri nke Aliexpress anyị ga-enwe ike inweta na 50% nke ego ya emee ihe.
Ntinye ego gi ego ekweisi Onyx Ace ebe a na Aliexpress
Tronsmart T6 Gụnyere
Nhọrọ nke abuo bu ọkà okwu pụrụ icheYa, Tronsmart T6 Plus. A okwu na-eweta ọnụ abụọ nke isi e ji mara anyị na-ejikarị anya na a gadget nke ụdị; ike na obere nha. Na ijikọta nke a na a ihe ngosi ohuru ohuru nke mere na egwu na-ada n'akụkụ niile nsonaazụ ya bụ ihe na-akpali akpali.
Tronsmart T6 Plus atụmatụ ruo 40W ike. O doro anya na ị ga-enwe ike ịnụ ụtọ egwu kachasị amasị gị n'ụlọ ọ bụla. Na na na-emeghe oghere ọ ga-enwe ọtụtụ ihe na-ekwu. Bass na-enwe mmetụta miri emi. Anyị nwekwara ekwe omume nke equalization ka mmeputakwa, dị ka okike si dị, bụ ihe kachasị mma.
Otu nkọwa nke ndị ọrụ kacha amasị bụ na ọ dịkwa mkpa jiri teknụzụ TWS. Ka ọ were anyị nwere ike ijikọ ha na ndị ọzọ na-ekwu okwu dakọtara maka ụda stereo kacha mma. Na mgbakwunye, na Tronsmart T6 Plus nwekwara ị nwere ike ịrụ ọrụ ma jiri olu olu nke ngwaọrụ gị. Ekwu okwu bara ụba nke ị nwere ike ịzụta na Aliexpress jiri ego 43% belata.
N'ebe a ị nwere ike ịzụta okwu T6 Plus na Aliexpress na oke ego
Tronsmart Spunky Naa
Amalitere na njedebe nke 2.019, ọnwa ole na ole gara aga anyị nwere obi ụtọ ịnwale ha ma rụọ a-akpali nnọọ mmasị nyochaa. Site na ezigbo akụkọ sitere n'aka ndị ọrụ kpebiri ịzụta ha, Tronsmart's Spunky Beats enwetala aha ọma. Ha nwere kacha ọhụrụ Qualcomm mgbawa nke ahịa na-enye enwekwu njikọ njikọta nke ọma.
El Koodu Qualcomm aptX jiri Spunky Beat, nye a soundda olu dị ka nke CD. Ihe na - eme ka onye ọrụ ahụ nwee afọ ojuju. Ike olu, ụda dị mma, Nkagbu Noise na ezigbo ikike ịchị onwe gị zuru oke maka ihe ga-amasị ha. Ọzọkwa, ekele nke afọ 10 nke Aliexpress ị nwere ike ijide ha jiri ego nkwanye 70% dị ịrịba ama.
N'ebe a ị nwere ike ịzụta Spunky Beat na Aliexpress na nkwalite
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Tronsmart na-emekọ maka afọ iri nke Aliexpress